यी १९ वर्षीय युवती, जसको कम्मरले तान्यो विश्वका मानिसलाई ! | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
यी १९ वर्षीय युवती, जसको कम्मरले तान्यो विश्वका मानिसलाई !
जेठ ९ गते, २०७६ - १३:०१
एजेन्सी । मानिसहरुले आफ्नो फिगरको तारिफ गरुन भनेर संसारका सबै केटी पतलो देखिन चाहन्छन् । फिगर बनाउन युवतीहरुले धेरै पसिना बगाउने गर्छन । भनेज्वेलाकी मोडल एलेइरा एजेन्डानो ले आफ्नो फिगर यसरी मेन्टेन गरेकी छन् की उनलाई देखेर मानिसहरु छक्क पर्छन ।
शरिरका अन्य अंग मोटै देखिएपनि कम्मर भने निकै पातलो छ । ६ बर्षको कडा मेहनतपछि उनको कम्मर यस्तो भएको हो । संसारकै सबैभन्दा अलग देखिका उनले आफ्नो कम्मर २० इन्चको बनाएकी छन् । पतलो कम्मर बनाउनका लागि उनले २३ घण्टा टाइट कपडा लगाउथिन् । उनले २० पटक भन्दा बढी सर्जरी समेत गराएकी छन् ।
१९ बर्षको उमेरमा उनले पहिलो पटक छातीको सर्जरी गराएकी थिइन् । उनी परफेक्ट फिगरका माध्यमबाट संसारभर चिनिनँ चाहेको बताउँछिन् । आफ्नो फिगरसँग गहिरो प्रेम भएको उनको भनाई छ ।
जेठ ९ गते, २०७६ - १३:०१ मा प्रकाशित
आइडल रवि ओडको नयाँ गीत ‘पिएर नशा’ (भिडियोसहित)
क्यान्सरबाट निको भई घर फर्किए ऋषि कपुर
तीन वर्ष पछि बलिउड फर्किइनन् प्रियंका, सार्वजनिक भयो पिंकको ट्रेलर
जिग्री र पाँडेले नयाँ हाँस्य कार्यक्रम ‘सक्किगो नि’ल्याउने
सनी लियोनीबारे लुकेका यी ३३ रोचक तथ्यहरू
यस्तो छ दीपक मनाङ्गेको लगानी रहेको चलचित्र ‘पोई पर्यो काले’को गीत